YEMEN:MSF OO KA HADASHEY XAALADDA RABSHADDA KU DHISAN EE LA SOO GUDBOONAATA KUMANAAN SOOMAALI IYO ITOOBIYAAN AH OO KA SOO GUDBA GACANKA CADAN - MSF Gudaha Soomaaliya- Helitaanka daryeel Caafimaad
Munaasabaddii ay ku soo bandhigeysey warbixinteedii magaceedu ahaa “Wax ay kala doortaan ma lahan”, ayaa MSF waxa ay ku baaqdey in la kordhiyo gargaarka la siiyo qaxootiga iyo muhaajirinta ka soo cararaya dagaalka iyo gaajada
Nayroobi, Juunyo 19, 2008 – Kumanaan Soomaali iyo Itoobiyaan ah ayaa halis gelinaya nafahooda sanad kasta iyaga oo ka soo gudbaya Gacanka Cadan si ay uga soo baxsadaan iskahorimaad iyo saboolnimo ba’an. Safarka ayaa wata haliso aad u badan, maaddaama dadku ay dhibaato iyo rabshad ka soo gaarto tahriibiyeyaasha oo ayna dadku helaan gargaar yar marka ay yimaadaan Yaman. Warbixin cusub oo uu daabacay ururka bani’aadamnimada ee caafimaadka ee caalamiga ah ee Médecins Sans Frontières (MSF), ee uu cinwaankeedu ahaa “Wax ay kala doortaan ma lahan” ayaa qoraysa xaaladaha safarka halista badan waxaana ay ku baaqeysaa in la kordhiyo gargaarka ay helaan kumanaanka qaxootiga, magangelyo-doonka, iyo muhaajiriinta ah ee ka soo cararaya dalalkooda ee u soo cararaya Yaman.
Iskahorimaadka Soomaaliya ka socda ee ka sii darey daraaddii iyo abaarta saameysey Geeska Afrika, ayaa waxa ay kordhiyeen tirada dadka cusub ee imanaya. Sanadkii 2007dii, sida ay qabto Qaramada Midoobey, waxaa safarkan halista badan soo galey 30,000; shantii bilood ee ugu horreeysey sanadkii 2008dii in ka badan 20,000 oo qof ayaa yimid dalka Yaman. Qaar badan ayaanse marna soo gaarin halkii ay ku soo socdeen. Sanadkii 2007dii waxaa lagu soo warramey in ka badan 1,400 oo dad dhintey iyo kuwo la la’ yahay isugu jira; ilaa hadda, sanadka 2008, 400 qof ayaan xeebaha Yaman nolol ku soo gaarin.
Warbixintu waxa ay ku fadhidaa in ka badan 250 markhaatikac ah oo ay Yaman ka ururiyeen kooxaha MSF ilaa bishii Sebtembar 2007dii. Doomo 8 ilaa 10 mitir ah oo loogu talogaley 30 ama 40 qof ugu badnaan, ayaa lagu guraa wax ka badan 100 qof oo rakaab ah. Dadka ayaa lagu khasbaa in ay fadhiyaan hal meel iyaga oo aan dhaqdhaqaaqin labada ama saddexda maalmood ee ay safarka ku soo jiraan waxaana, inta badan, loo diidaa cunto iyo biyo.
Tahriibiyeyaasha ayaa ah kuwo aad u naxariis daran, iyaga oo qaraaca qof kasta oo isku daya in uu dhaqaaqo. Xaaladaha waxaa ay ku sii xun yihiin dadka la geliyo godadka hoose ee doonta – oo ah godad aad u yaryar oo aan daaqado lahayn oo loogu talogaley in alaabada lagu keydsado. Labaatan qof ama wax ka badan ayaa lagu ciriiriyaa godadkan, iyaga oo is-dul-saarsaaran. Xaaladaha ayaa ah kuwo aad u xun oo waxaa lagu soo warramey in saddex-meeloodow meel doomaha ay dad ku dhinteen. Sababaha ugu badan ee ay dadku u dhinteen waxa ay ahaayeen qaraacis ba’an, cunto iyo biyo la’aan, iyo neef-qabatin ka dhashey godadka la geliyey dadka. Dhowr ka mid ah dadka la wareystey ayaa sidoo kale sheegey xaalado ay tahriibiyeyaashu doobta ka tureen rakaab ay carruur ka mid ahaayeen.
Ka soo degista xeebta Yaman waa mid aad halis u ah. Si ay isaga ilaaliyaan in ay qabtaan mileteriga, ayaa doomo badan waxa ay yimaadaan goor habeennimo ah mana ku soo dhowaadaan xeebta. Tahriibiyeyaasha ayaa ku khasba in rakaabka ay ku boodaan biyaha moolka ah ee gunta dheer. Dad badan ayaa qaraqma; dadku ma dabbaalan karaan, mana dhaqaaqi karaan kabuubyo daraaddeed, ama waa ay jahawareeraan oo waxa ay garan waayaan halka ay xeebtu ka jirto.
Badi dadka la wareystey waa ay ogaayeen halista jirta, laakiin waxa ay MSF u sheegeen in aaney haysanin wax ay kala doortaan, maaddaama tani ay tahay istiraatiijiyadda keliya ee ay kaga soo baxsan karaan rabshadda iyo saboolnimada. Kuwa soo gaara xeebaha Yaman ka dib safarka halista badan, ayaa aan dhibaatadoodu halkaas ku ekeyn. Yaman waa dal kheyraadkiisu uu kooban yahay oo gargaarka la heli karo waa uu yar yahay.
“Ilaa hadda, waxqabadyada bani’aadamnimada ma ahan kuwo dad filan,” ayaa uu yiri Verdú, oo ah isuduwaha guud ee MSF ee Yaman. “Gargaar kale oo caalami ah ayaa degdeg loogu baahan yahay waana in dalalka deeqbixiyayaasha ah ay bixiyaan dadaallo siyaasadeed iyo kuwo maaliyadeed. Waxaa loo baahan yahay in kor loo qaado kartida waxqabad ee kuwa gargaaraya qaxootiga iyo in la helo hay’ado kale oo hawsha wax ka gala.”
MSF Gudaha Yemen
Médecins Sans Frontières ayaa mashruuc ka furtey xeebta koonfureed ee Yaman bishii Sebtembar 2007dii si ay gargaar caafimaad, mid nafsaani, iyo mid bani’aadamnimo u siiso dadka cusub ee halkaa imanayey. Koox socsocota ayaa gurmad iyo gargaar degdeg ah ku bixisa xeebta waxaana ay gargaarka caafimaadka degdegga ah ku bixisaa Xarunta Qaabilaadda ee Axwar. Siddeed bilood gudahooda, MSF waxa ay gargaartey dad ka badan 6,000 oo qof.
Tags: Gacanka Cadan, Geeska Afrika, Qoxooti, rabshad, tahriib, Yemen